सत्यको खोज र त्यसप्रति निष्ठा
April 08, 2018 Posted by Jhilko.com
कृष्णदास श्रेष्ठ सत्यको सवाल वैज्ञानिक चिन्तनको, दार्शनिक चिन्तनको एउटा केन्द्रीय सवाल हो । हाम्रो अवसर के भन्ने गर्छौ भने अन्यायमाथि न्यायको, असत्यमाथि सत्यको विजय अवश्य हुन्छ । यो एउटा ऐतिहासिक सत्य पनि हो, किनभने सत्यलाई सुरुमा मानिसहरुले नसकारे पनि, सत्यले विस्तारै–विस्तारै आफुलाई शक्तिशाली बनाउँदै लैजान्छ र अन्त्यमा गएर त्यसले आफुलाई विजय बनाउँछ । यसबाट कुन कुरा निस्कन्छ भने जो व्यक्ति इमान्दर र समझदार छ, उसले सत्य पक्षमा आफुलाई लगाउनु पर्छ । र सांचो भन्ने हो...बाँकी
अर्थमन्त्री अपरिपक्व !
April 03, 2018 Posted by Jhilko.com
लोककृष्ण भट्टराई वाम गठबन्धन सरकार बनेको धेरै भएको छैन । यसका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्य टाट पल्टिएको भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरे । यसलाई कसरी सुधार्ने, राजस्व संकलनको श्रोत के हो, उत्पादनमुलक अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उनले उल्लेख गर्न बिर्सिए । कुनै पनि सरकारले पारदर्शिताका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्तियो भनेर बाहिर ल्याउँदैन । दोश्रो विश्वयुद्धमा युद्धबाट जर्जर भएको चारैतिरबाट हमला गरिएको जर्मनले पनि ढुकुटी रित्तिएको भनेर बाहिर ल्याएन । बाराक ओवामा...बाँकी
भारतीय चङ्गुलबाट उन्मुक्तितिर माल्दिभ्स
March 05, 2018 Posted by Jhilko.com
लगभग पौने पाँच लाख मानिसहरु बसोबास रहेको दक्षिण एसियाली टापु देश मालदिभ्सले केही समयदेखि संसारको ध्यान तान्न सफल भएको छ । मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदसहित विपक्षी दलका अन्य नेताहरुलाई रिहा गर्ने आदेश दिएपछि हिन्द महासागरमा अवस्थित मालदिभ्समा नयाँ शिराबाट संवैधानिक सङ्कट आरम्भ भएको हो । अदालतको आदेश लगत्तै राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले सेना परिचालन गरेर सर्वोच्च अदालतको घेराबन्दी गरेका थिए । साथै मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति अब्दुल्लाका सौता भाइ मौम...बाँकी
अझ पनि नचेत्ने हो कमरेड !
February 28, 2018 Posted by Jhilko.com
महेश्वर दाहाल अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता कम्युनिस्टहरुबीचको एकता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात्को कोर्श भनेको मुलुकलाई स्वाधीन बनाएर समृद्धिको योजनाबद्ध यात्रामा लैजाने हो । देश र जनताका आधारभूत अन्तरविरोध जसलाई समान्य भाषामा समस्या पनि भनिन्छ । यसको समाधानका लागि कम्युनिस्टहरुबीच एकताबद्ध हुनु पहिलो शर्त हो । सँगैै राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर, देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरुलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एकाकार गरेर लैजान सक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट एकता,...बाँकी
क. पुष्पलालको नीति अङ्गालेर एकता गरौं !
January 12, 2018 Posted by Jhilko.com
लोककृष्ण भट्टराई नेकपाका दुई समूह एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गर्ने गरी वाम गठबन्धन बनाए भने अर्काे समूह मसाल पनि गठबन्धनभित्र आयो र चुनावमा भाग लियो । मसालले प्रतिनिधि सभामा एक सिट प्रदेश सभामा दुई सिट प्राप्त गरेको छ । उसले पार्टी एकीकरणमा चासो दिएको छैन । नेकपाका अन्य समूह मजदुर किसान पार्टीले गठबन्धन बाहिर बसेर प्रतिनिधि सभामा एक सिट र प्रदेश सभामा एक सिट चुनाव जितेको छ । नेकपाका अन्य समूह सीपी मैनालीको माले र मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी माओवादीले कतै सिट प्राप्त गर्न सकेनन् । प...बाँकी
January 03, 2018 Posted by Jhilko.com
सीता अधिकारी २०५२ सालदेखि आजसम्म राजनीतिको केन्द्रमा छन् प्रचण्ड । उनी राजनीतिको आकर्षण त हुँदै हुन, बेलाबेलामा विरोधको तारो पनि बन्ने गर्छन । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र अहिले सदनमा तेस्रो पार्टी बनेको छ, तर उनको आगामी भूमिका के हुन्छ भनेर राजनीतितिर चासो राख्ने सबैको आँखा उनैतिर फर्किएको छ । समकालीन राजनीतिमा मात्र होइन प्रचण्डले आफू पार्टीको नेतृत्वमा आएदेखि दूरगामी अर्थ राख्ने धेरै महत्वपूर्ण कार्य गरेका छन् । वाम ध्रुवीकरण, सशक्त संघर्ष, लोकतान्त्रिक शक्तिसँगको सहकार...बाँकी
केपी र पीकेलाई केही सुझाव
January 02, 2018 Posted by Jhilko.com
लोककृष्ण भट्टराई नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको ६८ वर्ष पूरा भयो । ०१९ सालबाट फुट्न शुरु भएको कम्युनिस्ट पार्टी ०४६ सालको वृहद संयुक्त जनआन्दोलन निर्माणको शिलशिलामा जुट्न शुरु भयो । फेरि पनि फुटदै जुट्दै यो आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ । ०४८ सालको चुनाव अघि हाम्रै प्रयासमा माले÷माक्र्सवादी एकता भएपछि अरु साना ग्रुपहरु मिलेर एकता केन्द्र समेत बन्यो । त्यसबेला यो लेखकले तत्कालिन चर्चित नेताहरु मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधान, निर्मल लामा, पुष्पकमल दाहाल, विष्णुबहादुर मान...बाँकी
माओलाई सम्झनुको अर्थ
December 27, 2017 Posted by Jhilko.com
१२ पौष, काठमाडौं । हिजो २६ हिजेम्बर विश्व सर्वहारा वर्गका महान् नेता माओ त्सेतुङको हिजो १२५ औं जन्म जयन्ती मनाइयो । यो दिवसलाई सर्वहारा वर्गले विश्वव्यापी रुपमा मनाए । नेपालमा पनि विभिन्न कम्युनिस्ट घटकले विविध रुपमा यो दिवस मनाए । अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तत्कालीन चीनलाई मुक्त गराउनका लागि मात्र होइन सिङ्गो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओले पु¥याएका योगदानहरू अतुलनीय छन् । कमरेड माओले दर्शन, राजनीति, संस्कृति, युद्धकलाका बारेमा दिएका क्रान्तिका...बाँकी
आगामी वाम सरकारले गनुपर्ने कामहरु
December 20, 2017 Posted by Jhilko.com
लोककृष्ण भट्टराई नेपाली जनताले २००७ सालदेखि निरंकुशताका लागि लडेरै आएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु र नेपाली कांग्रेसलाई कसैलाई सरकारमा पु¥याएका छन भने कसैलाई विपक्षमा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेसको २०१५ सालको कुरा छोडौं राजाले निरंकुशता लादे । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा बहुमत दिएर पु¥याए भने वामदल ने.क.पा का दुई समूहलाई विपक्षमा राखे । ०५१ सालमा कांग्रेसलाई विपक्षमा राखे र संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल वाम दललाई सरकारमा पु¥याए । त्यसबेला वा...बाँकी
निषेधले द्वन्द्व निम्त्याउँछ
December 19, 2017 Posted by Jhilko.com
सीता अधिकारी नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन भएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन त नेपालमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको छ । नेपालको निर्वाचनलाई विश्वभरिबाट विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो । खासगरी निर्वाचनपछि राजनीतिक उतारचढाव र संक्रमणकालबाट देश मुक्त हुन्छ कि हुँदैन रु यसले अन्तर्राष्ट्रिय खासगरी छिमेकीसँगको सन्तुलन मिलाउन सक्छ कि सक्दैन रु नयाँ शिराबाट देशमा द्वन्द्व देखापर्छ कि समृद्धि र स्थायित्व हुँदै देश अगाडि बढ्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रु...बाँकी